MM Live News - Page 490 of 580 - MEDIA AND ENTERTAINMENT
တရားသူကြီးထံ ပေးပို့စာ အပိုင်း-၁ ‘စောဂျင်ဟန်း’ဆိုတဲ့လူသားတစ်ဦးဟာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ တောမြို့လေးတစ်မြို့မှာ မွေးဖွားပြီး လောကကြီးထဲမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်..။ မောင်နှမ ၁၀ ယောက်မှာ သူက ၆ ယောက်မြောက် သားယောက်ျားလေးပေါ့…။အဖေက လောင်းကစားသမား…။အမေကဈေးထွက်ရောင်းပြီး ကလေး ၁၀ ယောက်ကို အနိုင်နိုင် လုပ်ကျွေးနေရတဲ့ဘဝ..။ သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုမရှိ..သူတစ်ပါးကို အပြစ်လွှဲချ…ဥပဒေချိုးဖောက် … တစ်ခုခုကိုစွဲစွဲမြဲမြဲမလုပ်နိုင်..…စတဲ့ ဆိုက်ကိုပါ့သ်ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့မွေးဖွားလာတယ်။လူတွေကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်…။ စောဂျင်ဟန်း….စောဂျင်ဟန်းဟာ လူပျိုပေါက်စဖြစ်လာကတည်းက အိမ်ဘေးက မိန်းကလေးတွေကို အမြဲ မကောင်းကြံဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့သူ…။ မဟုတ်တာမှန်သမျှ အကုန်လုပ်တဲ့ စောဂျင်ဟန်းကို ဆိုဆုံးမမယ့်သူ တစ်ယောက်မှမရှိ…။စောဂျင်ဟန်းဟာ ခိုးမှုနဲ့လည်း ရဲစခန်းကို ခဏခဏရောက်တယ်။ သူဟာ ၁၇ နှစ် အရွယ်ရောက်တော့ ဆိုးလ်မြို့ကိုတက်ပြီး စက်ရုံတစ်ရုံမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ဆိုးလ်မြို့မှာ […]
ဖောက်ပြန်နေတဲ့ချစ်သူကောင်လေးပြန်လာဖို့ ဘိုးတော်ဆီသွားလိုက်တာ ချစ်သူပြန်လာဖို့ မလိုအပ်တော့တဲ့ ကောင်မလေး (ဖြစ်ရပ်မှန် ) ကျွန်မ နဲ့ ချစ် သူဟာ လက်တွဲလာတာ ၄ နှစ် ရှိပါပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အလိုလိုနေရင်း ” ငါတို့လမ်းခွဲကြရအောင် သူက ကျွန်မကို မချစ်တော့ပါဘူး၊ အခု သူကအသစ်တွေ့နေပါပြီ လက်တွဲလာတဲ့ အချိန်တွေမှာ ချစ်တယ် ဆိုတာ ညာပြောခဲ့တာပါ။ သူက ချစ်သူ အသစ်နဲ့ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်တော့မှာ” လို့လာပြောပါတယ်။ ကျွန်မလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မ ဆီသူပြန်လာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်မ ဘာမှားနေလဲ၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိလဲ၊လို့မေးပြီးလိုအပ်တာတွေရှိရင် ကျွန်မပြင်ပါ့မယ်။ သူလိုတာ အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သူ့အလိုကျ အားလုံးဖြစ်စေရပါမယ်။” အရင်လိုပဲ ချစ်သူ ပြန် ဖြစ်နေဖို့ […]
October 17, 2018 MM LiveLeaveaComment on စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဘုရားနှစ်ဆူကြားထိလမ်းမှားသူ….
စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဘုရားနှစ်ဆူကြားထိလမ်းမှားသူ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ကဿပဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တွင် သူငယ်ချင်း လယ်သမားနှစ်ဦးရှိ၏။ လယ်သမားတစ်ဦးသည် ဘုရားရှင်၏တရားတော်​ကိုနာကြားပြီး တရားအရသာကို သူ၏သူငယ်ချင်းလယ်သမားအား ခံစားစေချင်သည်။ ထို့ကြောင့် သူနှင့်အတူတရားလိုက်နာရန် တိုက်တွန်း၏။မည်သို့ပင်ပြောဆိုသော်လည်း မလိုက်ပေ။ “တရားမနာချင်ပါဘူး သူငယ်ချင်းရာ”ဟု ပြောလိုက်ရင်ပြီးတာပါဘဲ။အပြစ်ဆိုချင်သည့်စိတ်,အကောင်းမမြင်သည့်စိတ် ပါလာသောအခါ သံသရာမှာ နစ်မွန်းရပေတော့သည်။ သူပြောလိုက်သည့်စကားမှာ…. “ဟေ့ကောင် မင်း ဘုရားတရားကိုလိုက်နာလို့ ငါ ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။မင်းဘုရားက ငါ့လယ်ကို လာထွန်ပေးမှာလား”ဟု ပြောလိုက်၏။ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည့်ဘုရားရှင်အား ပြစ်မှားစော်ကားသည့်စကားဖြစ်သွားသည့်အတွက် အရိယူပဝါဒကံ ထိုက်မှန်း သူမသိချေ။ မသိ၍ရှိ်ခိုးတောင်းပန်ခြင်းလည်း မပြုခဲ့ချေ။ယခုခေတ်တွင်လည်း ဘာသာရေးအသိနည်း၍ အရိယူပဝါဒကံ ထိုက်မှန်းမသိထိုက်နေသူများရှိနိုင်ပေသည်။သတိထားသင့်၏။ အဆိုပါ လယ်သမားသေလွန်သည့်အခါ တောကြီးမျက်မည်းထဲတွင် လယ်သမားပြိတ္တာဖြစ်သွား၏။ ရပ်နားချိန်မရဘဲ ပြစ်မှားခဲ့သည့် စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ချွေးသံတရွဲရွဲဖြင့် လယ်ထွန်နေရ၏။မည်မျှကြာသနည်းဆိုသော်ဘုရားနှစ်ဆူကြာလေ၏။ တစ်နေ့တွင် ဘုရားဖူးလာသည့် ရဟန်းတော်များလမ်းမှားနေ၍ လယ်သမားပြိတ္တာကြီးအား ရိုးရိုးလူထင်ပြီး လမ်းသွားမေး၏။ထိုအခါ […]